27 Sep, 2019 - 00:09	 2019-09-26T21:32:24+00:00 2019-09-27T00:03:47+00:00 0 Views
KWAYEDZA makaita basa nechirongwa Tishamwaridzane. Ndakazomuwana wandaida saka vaifona pa0735 517 492 chiregai muchawanawo.
Ndiri mukomana ane makore 31. Ndinoda mukadzi ane makore 25 kana 27. Nhare yangu 0787 336 085.
Makadii veKwayedza? Ndinotsvagawo musikana wekuroora, ini ndine makore 27 ekuberekwa uye ndotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 25. Ngaave anoda zveimba, handisi pamushonga. Andifarira anondibata pa0778 482 746.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 26 ekuberekwa, ndinotsvakawo musikana ane makore 18 kusvika 22 anoda muchato uye ari pachokwadi nekuchengetana. Ngaave anoziva kuti kuna Mwari. Akavimbika anondibata pa0713 173 974.
Makasimba here veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 28, ndotsvagawo mukadzi ane makore 24 kusvika 36 ane mwana mumwe kana vaviri. Andifarira ngaandibate pa0712 496 798.
Ndinotsvagavo mukadzi wekuroora ane makore 30, ini ndine 33. Chero ane vana vake ngaandibate pa0786 381 725.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 23, ndinotsvagawo musikana anoda zvemba. Ngaandibate pa0712 312 014, handina chirwere.
Makadii henyu? Ndiri mukomana ane makore 23, ndinotsvagawo musikana wekushamwaridzana naye. Nhare yangu 0772 208 068.
Makadini? Ndotsvagawo mudzimai ari muHarare ane zvaanoita muhupenyu. Ngaave ari HIV negative ane makore 35 zvichidzika. Nhare yangu 0779 276 530.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 28, ndinotsvagawo murume wekushamwaridzana naye. Ndine mwana 1, andifarirawo anondibata pa0784 255 156.
Makadii? Ndodawo mudzimai ari pamushonga ane makore 25 – 36 anoshanda. Nhare yangu 0785 202 997.
Makadini? Ndiri murume ane makore 33, HIV negative, professional uye nhamba dzangu 0713 958 196. Ndinoda mukadzi ane makore 20 – 30 ane course uye anoshanda. Ari HIV negative ngaandibate 0713 958 196.
Makadii veKwayedza? Ndishambadzeiwo, ndiri murume ane makore 38 nevana vaviri. Ndinodawo mukadzi wekuroora ane makore 20 kusvika 29 asiri pamushonga seni. Anondida ngaandibate pa0719 137 658. Zvakawanda totaura, ndiri muHarare.
Makadii veKwayedza? Ndishambadziwo nhare yangu, ndiri murume ane makore 36. Ndinotsvagawo mukadzi wekuvaka naye imba ari pachokwadi. Ndinoda mutsvuku anomatawo asina chirwere ane makore 24 – 26. Anoshandawo ari serious nyora meseji pa0773 504 480.
Makadii? Ndiri murume ane makore 39 ekuberekwa nemwana 1, ndoshanda uye ndoda mudzimai anove mupurisa kana anoshanda pachipatara. Nhare yangu 0774 699 158.
Makadini veTishamwaridzane? Ndiri mukomana ane makore 30 ekuberekwa uye ndinodawo musikana ane makore 18 – 25. Nhamba yangu 0777 406 287.
Makadiiko? Ndiri mukadzi ane makore 27 ndinotsvagawo murume ari serious nezveimba. Ndine mwana 1 uye ndiri pamushonga, ngaave ane makore 35 zvichidzika. Andifarira ngaandibate pa0775 445 014 asi ngaave anogeza uye anoshanda.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 33, ndotsvagawo murume ane makore 34 – 45 anoda zvekuroora uye ari HIV positive. Ngaave asiri pamushonga asingarware. Nhare yangu 0777 120 527.
Makadii veTishamwaridzane? Ini ndiri mukomana ane makore 26 ekuberekwa uye ndinotsvagawo musikana ane makore 25 zvichidzika asiri pamushonga nekuti ini handisi pamushonga. Ndatenda nhare yangu 0714 234 851.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 37, HIV negative uye ndiri kutsvagawo murume ane makore 40 – 42. Ndobatika pa0773 768 177.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 30, handina mwana uye ndotsvakawo mukadzi wekuroora ari pachokwadi.
Vanoda zvekutamba kwete, nhare yangu 0714 772 782.